Mutungamiri Kubva Semalt: Maitiro Aungaita Nezvose Zvose Zvinosvibisa Kufoni Yenyu
Ting Ting. Iwe uchangobva kugamuchira mharidzo. Iwe unoisa pasi pepepanhau, cheka muhomwe yako yehomwe uye ubudise foni yako. Arrgh. Iwe unofara - security surveillance cctv system. Iwe unoverenga chimwe chinhu chakadai: 'Real Rolex Watch, 30% Off'. Iwe unotarisa nhamba yemutumwa achifunga kuti mumwe munhu waunoziva uye unoziva kuti hauna kumbozviona. Wakatemerwa.
Julia Vashneva, uyo Semalt Mutevedzeri Mukuru weVatengi veMutambarakede, anoti nhasi, mafoni efoni akave chinangwa chekusarudzira kushambadzira kwemashoko. Dzimwe nguva mutumeri anogona kunge ari bhizimisi rakanaka (iro rawakapa nomufaro nhamba yako) asi kazhinji nguva, ivo vanobva kune nhamba dzenhema dzinoshambadzira zvigadzirwa zvakashata uye / kana zvinowanikwa. Iwe unogona kufunga kuti iyi ndiyo mhepo yakashambadzirwa yepa telemarketing. Vari kuvhiringidza, asi iwe unogona kuvadzivirira kuti vawane zvakanaka.
Kana iwe waifunga kuti spam yakanga isingakanganisi, iwe ungashamisika kuziva kuti hazvisi pamutemo. Federal Federal Commission (FTC) inotaura kuti hazvina kutenderwa kutumira chero upi zvake unoshevedzwa mutengesi kune imwe chipfeve isina kushandiswa (kusanganisira mahedheni uye maserofoni) kunze kwekuti mupiriri wacho anotora mashoko akadaro. Sezvazviri, hapana chakaipa kana sangano raunosangana naro nguva dzose rinokumbira mvumo yako yekukutumira mahara. Asi mutemo, zvisinei, unokonzera maitiro asingasviki ehurumende sekuongorora uye zvematongerwe enyika.
> Unofanira kuitei kana uchiramba uchitambira mashoko kubva kune dzimwe nyika usati wambonzwa? Zvakanaka, pane mukana wakanaka wokuputsa mutemo. uyewo hazvirevi kunze.Kana iwe uchigamuchira mharidzo inokumbira Pini yako kana password, izvo zvinotyisa.
Dzivisa nhamba yevatumwa
Izvi zviri pachena kuti nzira iri nyore uye yakajeka yekubvisa spam. Mune purogiramu yako yakasarudzwa yemeseji, bvisa mutumira. Zvinofadza, mutumwa haazozivi kuti wakavadzivirira. Pane imwe ye-Android device, chengetedza matatu matatu akaenzana kumusoro kwekona kona. Sarudza "Vanhu & Zvokusarudza" ipapo "Bvisa". Pane iPhone, pane matatu matatu uye gumisa nekuvhara nhamba.
Taurira kumutengesi wako
Unogona kugutsikana nekuvhara mutumwa asi Federal Trade Commission haifaniri kufunga kana iwe ukaita basa rehurumende: kureva zvakaipa. Pasinei nehupi hwehutachiona hwebasa, iwe une rusununguko kubata spammer kuzvidavirira. Tsvaga nhamba chaiyo yakatsaurirwa kune yako network pakurondedzera zviitiko zvakadaro. Kana vanhu vakawanda vakaungana kuti varwise spammers, nyika yaizoona zvishoma zvichitsamwisa mhinduro dze spam.
Ngatitorei mamiriro ezvinhu maunowana chido chekutsvaga kuti ndiani ari mushure mharidzo ye spam. Zvichafanira here nguva yako? Zvichida kwete. Iko mikana ndeyokuti iwe haugoni kuwana mhinduro. Pfungwa iyi iri nyore. Haisi pfungwa yakanaka yekukurukura nemutumiri. Kupfura kwako kwakanakisisa kungava kuvadzivisa uye / kana kuudza zviremera zvakakodzera.
Shoko rekuyevera. Usanamatira pane chero chikwata chinowanikwa mumutauro wemashoko. Pamusoro peizvi, usapindura kune chero chikumbiro chekombiyuta yako yekombiyuta mashoko ekutumira, zvido zvekadhi rechikwereti kana chero rumwe ruzivo rwemunhu.